Maalinta: Abriil 26, 2020
Maalgashiga Isgaarsiinta elektiroonigga ah ayaa korodhay 5G iyo wixii ka dambeeya Dhulka Diyaar garoobay
Gaadiidka iyo Kaabayaasha Wasiirka Adil Karaismailoğlu, Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Authority Technologies (ICTA), ay diyaariyeen "Sector 3 Report Turkey Electronic Communications Bishiiba Market Data" waxaa laga helay qiimeynta of n. Adoo eegaya 2019, isla markiiba [More ...]
'Caafimaadka Ciidamada', oo ka bilaabmay dagaallo fayras ah, ayaa dalal badan ka noqday mid firfircoon. Hogaamiyaasha warshadaha militariga militariga, carwada aduunka ee ugu horeeysa ee caalamiga iyo shir ay la galaan xafiisyada wax iibsiga militariga ee ciidamada aduunka 9-10 Juun 2020 [More ...]
Kaliforniya Si Looga Yareeyo Dhuxusha Gaasta Guryaha Lagu Qoro Mashaariicda Tareenka
Si loo yareeyo qiiqa gaaska cagaaran ee gaadiidka ee Gobolka California, USA, $ 17 milyan ayaa la siiyay 500 mashruuc oo gaadiid. Wakaaladda Gawaarida Gobolka California waxay yareysey qiiqa gaaska ka baxa sanadkaan iyo [More ...]
Iyada oo la furay xilli dhismeedka Xarunta Saadka, oo lagu aasaasay meel 400 mitir murabac ah oo Kars oo aasaaska la dhigay Abriil 7, 2017, shaqooyinku waxay bilaabeen mar kale. Saddex sano ka hor waxaa ku xigay agagaarka Aagga Wershadaha ee Kars [More ...]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. AKSUNGUR Diyaaraddaha Aan Duuliyaha Ahayn (UAV), oo ay soo waddo TUSAŞ, ayaa isku diyaarineysa inay soo gasho alaabada. Maareeyaha Guud ee Duulista Hawada iyo Hawada ee Turkiga Dr. aasaas [More ...]
Gegada Diyaaradaha ee Trabzon ayaa xirmay 1 Duulimaad Bil ah
Turkey ayaa ugu muhiimsan waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo 29 kun oo sano uu diyaarad ka runway Trabzon Airport ee degtey waxaa la daryeelo. Dawladda Hoose ee Trabzon, waa kaabayaasha ka imanaya cusboonaysiinta jidkii hore [More ...]
Mashruuca Saldhigga Nidaamka Raadinta Heerka 3aad ee Antalya Heerka Meltem ayaa bilaabmay
Howlaha Nidaamka Tareenka ee Heerka 3aad ee Dowlada Hoose ee Magaalaweynta Antalya waxay ku socotaa xawaare aad u weyn. Hawlaha kaabayaasha ayaa laga fuliyay mashruucan, kaasoo bilaabay masraxa Meltem markii la dhammeystirey isgoyska dabaqyada badan. Saldhigga Baska ee Varsak'u, Isbitaalka Cilmi-baarista Waxbarashada Antalya [More ...]
Kala Duwanaanta Noolaha ah ayaa ku kordhay Izmir Bay
Izmir degmada Metropolitan sameeyay ee Sayniska iyo Golaha Cilmi baarista tignoolojiga iskaashiga Turkey "Izmir Bay Oceanographic Kormeerka Project" shows in sawiro la soo dhaafay qaaday oo ka mid ah Gulf of habka dedejiyey ansixin. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir IZSU [More ...]
Hadiyad 8 GB ah oo loogu talo galay 20 ilaa 4 Sano Dhallinyar ah oo ka timid Madaxweyne Soyer!
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay u soo bandhigi doontaa xirmo internet 18 GB ah dhalinyarada da doodu u dhaxayso 20 iyo 4, kuwaa oo ku jira bandowga. Shakhsiyaadka da'doodu ka yartahay 20 sano ee ku jira cabbirada coronavirus [More ...]
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan wuxuu sheegay inay si guul leh u xafidaan qaaciddada "ganacsiga aan lala xiriirin" ee laga soo bilaabay ganacsiga shisheeye ee ka dhanka ah cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' (Kovid-19), iyo in codsigan la dhaqan geliyey ilaa bishii Maarso, [More ...]
nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19) Turkey ayaa tusaale u ah in halganka ka dhanka xaaladda dunida. kaabayaasha caafimaadka si kalsooni leh in Turkey la ka kililka doono ka dib markii uu dillaaco ee samaynta diyaarinta ka dhanka ah si dunida. Kulamada lagu qabtay Turkey, [More ...]
Maraakiibta ay ku tiirsan yihiin ayaa laga saaraa Saldhigga Tareenka ee Cusbada
Gawaaridii Rusty ee u haray aayahooda ee xarunta tareenka ee Osmaneli ayaa laga saaray. Gawaarida dagaalka, oo ku laabtay guriga sunta ah iyo halka ay maandooriyayaashu ku noolaayeen, ayaa laga soo qaaday Tareenka Gobolka. Saldhigga Bilecik [More ...]
Shirkadaha gaarka loo leeyahay Waxay sameyn karaan Gawaarida iyo Gaadiidka Rakaabka Tareenka
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, oo ka jawaabaya soo jeedinta CHP Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ayaa ku dhawaaqday in hay'adaha sharciga ee dowliga ah ama kuwa gaarka loo leeyahay ay ku shaqeyn karaan xamuulka xamuulka iyo rakaabka shabakadda tareenka. Tareenka Waddooyinka ee TR State [More ...]
Kaabayaasha Tamarta ee Soo-saarka ee Warshadaha Warshadaha
Turkey ayaa ugu horeysay Visa Kırklareli hirgeliyo caag gaar ah oo khaas ah abaabulan zone warshadaha bilaabay PAGDER libaax maalgelinta kaabayaasha tamarta ee OSB. Farsamada casriga ah ee Schneider Electric ee aaminka iyo si hufan u isticmaalidda tamarta [More ...]
Maanta oo ku taal Taariikhda 26 Abriil 1937 Sharciga 3156, oo maamusha khadka Edirne-Istanbul iyo khadka laanta Kırklareli, waxaa hirgaliyay Şark Demiryolları Türk AŞ. 20.760.000 wuxuu leeyahay dulsaarka 5 iyo sanadka 20 [More ...]